#CmrDialogue: နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်းထံမှအဆင်သင့်တုံ့ပြန်မှု - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Autres "#CmrDialogue: နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်းထံမှအဆင်သင့်တုံ့ပြန်မှု
နောက်တော်သို့လိုက်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်သမ္မတရှင်ပေါလု Biya ၏လုပ်ရပ်များ၏ကျင်းပနိုင်ရန်ကုလသမဂ္ဂ, အီးယူ Afrcaine, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, အ Francophonie နှင့်ဓနသဟာယအပါအဝင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်များကိုအားဖြင့်တန်ဖိုးထားကြသည်။
မဟာအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသဘောတူညီမှု၏ပါတီအားခုနှစ်တွင်, ပြည်နယ်၏ဦးခေါင်းအချို့တရားခံဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအမိန့်မြောက်ကိုရီးယားအဘိဓါန် West နှင့်တောင်အဘိဓါန် West အတွက်အကျပ်အတည်းနှင့် ဆက်စပ်. ဖမ်းဆီးသူတွေကိုဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမိန့်ဟာဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏ပိတ်ပွဲ၏အကြိုအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နက်ဖြန်နေ့၌ပြုလုပ် Post-ရွေးကောက်ပွဲကိုတောင်းဆိုမှုများဖမ်းဆီးမြား၏အလှည့်ခဲ့ပါတယ်။ မောရစ် Kamto 102 နှင့်အခြားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကများမဟာမိတ်များဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကသူခဲ့ရတယ်သောအမှုကိုပြု၏, ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏သန့်ရှင်းသောဥပဒေကြမ်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သောလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Francophonie မှာအစီအမံနဲ့ Grand အမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏ကျင်းပနိုင်ရန်ကြိုဆိုသူအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Louise Mushikiwabo ဖြစ်ပါသည်။
#Cameroun : @LMushikiwabo အဆိုပါလျှော့ချအစီအမံများနှင့်အမျိုးသားရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၏ကျင်းပနိုင်ရန်ကြိုဆိုသည်။
> 📑အဆိုပါစာနယ်ဇင်းဖတ်ရန်: https://t.co/gVhoc1Rgb5#CmrDialogue pic.twitter.com/G2MKbaYUpR
- အ Francophonie (@OIFfrancophonie) အောက်တိုဘာလ 5, 2019
ကင်မရွန်းအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံးမှစေရန်, အကျပ်အတည်းဒေသများတွင်ငြိမ်းချမ်းရေး၏ညှနျကွားထဲမှာသွားကြဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ပေါလု Biya ၏အစိုးရ၏အလိုတော်သရုပ်ပြဟာအဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကခေါင်းဆောင်များနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ထောက်ခံသူများ၏ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအပြုသဘောခြေလှမ်းတရပ်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ထိပ်တန်းဆောင်ရွက်ချက်များဘ & SW နေရာများအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုခါနီးခေါ်ဆောင်သွားကြသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
- အမေရိကန်သံရုံး Yaounde (@USEmbYaounde) အောက်တိုဘာလ 5, 2019
အဆိုပါတွစ်တာအကောင့်တွင်, ကုလသမဂ္ဂစင်ကာပူဒေါ်လာပါတီမှ Maurice Kamto ၏အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်ထောက်ခံကြိုဆို၏ lePorte ဝေဖန်။ တစ်ဦးကမက်ဆေ့ခ်ျကိုလည်းအမျိုးသားရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကင်မရွန်းကူညီပေးဖို့အဖွဲ့အစည်း၏အလိုတော်ဖော်ပြ။
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် @antonioguterres အားပေးအားမြှောက် @PR_Paul_BIYAမောရစ် Kamto နှင့်အခြားသူများရာပေါင်းများစွာကိုလွှတ်ဖို့ "S ဆုံးဖြတ်ချက်, အမေရိကန်ကထပ်မံပြောဆို @UNအဘို့ '' S ကိုကျောထောက်နောက်ခံ #Cameroon"S အမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး https://t.co/S2RqHKwRqr
- ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ (@UN_Spokesperson) အောက်တိုဘာလ 5, 2019
ဓနသဟာယထဲမှာအတူတူပုံပြင်။ ၎င်း၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး, ပက်ထရီရှာစကော့တလန်, ထို့အပြင်လုပ်ရပ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ပေါလု Biya အားဖြင့်5အောက်တိုဘာလထားကြ၏ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအလုပ်အောက်ပါသင့်လျော်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်။
.@PScotlandCSG အောက်တိုဘာလ 1024ပေါ်မှ Maurice Kamto ၏လွှတ်ပေးရန်, ကင်မရွန်း၏ Renaissance များအတွက်လှုပ်ရှားမှု (အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက) ၏ခေါင်းဆောင်တဦးနှင့်ပါတီများ၏ 2019 အဖွဲ့ဝင်များကကြိုဆိုပွီ
ဤသည်ကြေညာချက်5အတွက်အမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏နိဂုံးချုပ်နေ့ကကျ #Cameroon: https://t.co/SLOLS7Uafw pic.twitter.com/GUfHlpe29X
- အဓနသဟာယ (@commonwealthsec) အောက်တိုဘာလ 6, 2019
အာဖရိကသမဂ္ဂကိုလည်းထိုအဖြစ်ရပ်များမှတုံ့ပြန်။ အာဖရိကသမဂ္ဂကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ, Moussa Faki Mahamat "သမ္မတကပေါလု Biya အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားငြိမ်သက်အစီအမံကြိုဆိုသည်။ သူက "အထူးသဖြင့်အကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာတရားစွဲဆိုမှု၏ချုပ်ရာဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒါဟာအစ "မြောက်ကိုရီးယားအဘိဓါန် West နှင့်တောင်အဘိဓါန် West အတွက်အကျပ်အတည်းမှဖြေရှင်းချက်များအတွက်ရှာဖွေရေးမှမြှုပ်နှံကင်မရွန်းအတွက်ဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏ကျင်းပနိုင်ရန်။ " ကြိုဆို သူ့အဘို့, ရှစ်ကော်မတီများဖြင့်အကြံပြုချက်များ၏တစ်ဦးတည်းသာထိရောက်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုရှိပါတယ်။
အာဖရိကသမဂ္ဂကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ, @AUC_MoussaFaki Mahamat, မြောက်ကိုရီးယားအဘိဓါန် West နှင့်တောင်အဘိဓါန် West အတွက်အကျပ်အတည်းမှသုတေသနဖြေရှင်းချက်မှမြှုပ်နှံကင်မရွန်းအတွက်ဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏ကျင်းပနိုင်ရန်ကြိုဆို @ https://t.co/m2BZVhUO4p
- အာဖရိကသမဂ္ဂ (@_AfricanUnion) အောက်တိုဘာလ 6, 2019
ဝတျလုံးတျောရရှေ့နေ Bernard Muna szene မလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်